Otu esi eme ka umuaka si hu ebe ndi okenye
Weebụ & Chọọ Na-agba ọsọ weebụsaịtị
Kpochapụ Ụmụaka Site na Ịhụ Ndị Nwunye Adults
Chebe ụmụ gị site na ebe nrụọrụ weebụ na-ekwesịghị ekwesị
O kwesịghị iju gị anya na ịntanetị bụ ebe obibi na ebe nrụọrụ weebụ bụ ndị okenye ma ọ bụ nke ọma. Asụsụ na saịtị ahụ nwere ike ọ gaghị abụ ihe ị chọrọ ka ụmụ gị gụọ, foto ndị ahụ nwere ike ịbụ ihe ị na-achọghị ka ụmụ gị hụ. Ọ dịghị mfe igbochi ụmụ gị ịhụ ọdịnaya ndị okenye na ịntanetị, mana ngwanrọ na ngwà ngwanrọ nwere ike inyere gị aka ichebe ụmụ gị site na ọdịnaya ị chọghị ka ha hụ.
Ndobe Software na ngwa
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji otu n'ime ọtụtụ mmemme nkwụsị na saịtị ahụ, ị ​​nwere ọtụtụ nhọrọ dị mma . Enwere mmemme iji nyochaa ọrụ nwa gị na ngwaọrụ mkpanaka na kọmputa. NetNanny dị oke mma iji nyochaa ma gbochi ma ọ bụ chịkwaa ịlele ịntanetị ụmụ gị. Ọ bụrụ na nwa gị na-eji ngwaọrụ gam akporo ma ọ bụ iOS, ihe nlekota oru nne na nna na-achịkwa ngwa ngwa gụnyere MamaBear na Qustodio.
Nhọrọ Nhọrọ Nne na Nna
Tupu ịmalite ịzụ ahịa maka ngwanrọ, buru ụzọ iji chebe ụmụ gị.
Ọ bụrụ na ezinụlọ gị jiri kọmputa Windows iji chọọ ịntanetị, melite Windows parental control directly in Windows 7, 8, 8.1, na 10. Nke a bụ nzọụkwụ dị irè, ma akwụsịla ebe ahụ. Ị nwere ike ime ka njikwa ndị nne na nna gị na ntanetị gị, mgbakọ egwuregwu ụmụ gị, YouTube na ngwaọrụ mkpanaka ha .
Ihe atụ ole na ole bụ Google Family Link's SafeSearch and Internet Explorer parent controls.
Machibido Nchọgharị na njikọ Ezinụlọ Google
Google Chrome enweghị njikwa nke nne na nna, mana Google na-agba gị ume itinye ụmụ gị na usoro Google Family Link. Site na ya, ị nwere ike ịnwe ma ọ bụ gbochie ngwa ngwa nwa gị chọrọ ibudata na Ụlọ Ahịa Play Google, lee oge ole ụmụaka gị na-etinye na ngwa ha, ma jiri SafeSearch gbochi ohere ha nwere na weebụsaịtị ọ bụla.
Iji rụọ ọrụ SafeSearch na nyo nchọta ọchụchọ nchọta na Google Chrome na ihe nchọgharị ndị ọzọ:
Mepee Google na ihe nchọgharị ma gaa na ihuenyo mmasị Google.
Na ngalaba nchịkọta SafeSearch, pịa igbe dị n'ihu Turn on SafeSearch .
Iji gbochie ụmụ gị ịgbanwu SafeSearch, pịa Kpochie SafeSearch ma soro ntuziaka ihuenyo.
Pịa Chekwa .
Wepu Nchọgharị na Internet Explorer
Iji gbochie weebụsaịtị na Internet Explorer:
Pịa Ngwaọrụ .
Pịa Nhọrọ Ịntanetị .
Pịa na Ọdịnaya ọdịnaya
Na Ngalaba Inye Ihe Ọdịnaya , pịa Kwado .
Ị bụ ugbu a na Nduzi Ọdịnaya. Site ebe a ị nwere ike tinye ntọala gị.
Ntuzi taabụ - Nọọkọta ọkwa ọkwa maka asụsụ, nha, mmekọahụ, na ime ihe ike.
Akaụntụ saịtị akwadoro - Ngalaba aha ị na-ahapụ ụmụ gị mgbe niile ilele ma ọ bụ aha aha ị na-achọghị ka ụmụ gị lee, n'agbanyeghị ọkwa nke saịtị ahụ.
General taabụ - Nye ma ọ bụ gbochie nwa gị ka ọ hụ saịtị ndị a na-edeghị ma lee ma ọ bụ gbanwee usoro nhazi. Nke a bụkwa ebe ị mepụtara paswọọdụ, nke dị mma maka ụmụaka na-eto eto. Mgbe ị debere paswọọdụ, ọ bụrụ nwa gị gaa na ebe nrụọrụ weebụ ha chọrọ ịhụ, ma ọ bụ saịtị na-adịghị mma, ịnwere ike ịhapụ saịtị ahụ site na iji paswọọdụ. Ị nwere nhọrọ ịhapụ saịtị ahụ mgbe niile ma ọ bụ naanị kwe ka ọ bụrụ otu oge.
Ịdọ aka ná ntị: Njikwa ndị nne na nna dị irè mgbe nwa gị na-eji otu ngwaọrụ na nbanye nbanye nke ị nwere njikwa. Ha anaghị enyere aka ma ọ bụrụ na nwa gị na-eleta ụlọ enyi gị ma ọ bụ na-aga akwụkwọ, ọ bụ ezie na ụlọ akwụkwọ na-enwekarị ihe mgbochi ebe nrụọrụ weebụ dị ike. Ọbụna n'ọnọdụ kachasị mma, njikwa ndị nne na nna nwere ike ọ gaghị adị irè 100.
Kedu ihe bụ Hosting Hosting?
Mụta Ntọala HTML - maka saịtị Weebụ
10 Ngosipụta Ngwá Ọrụ Ndị Dị Ukwuu na Tumblr
Esi tinye otu YouTube Video na WikiSpaces Wiki
Atụmatụ Nkwado Free Blog
Nchekwa igwe maka Video: otu Nchịkọta
Olee otú ị ga-esi gbasaa onwe gị na YouTube
Tinye Blog Templates na Blogger Blog gị
Mụta ụzọ kachasị mfe iji tinye bọtịnụ PayPal na Blog gị
Kedu ihe OLED pụtara?
Nchịkọta egwu egwu YouTube
Nchọpụta nsogbu CF Ebe nchekwa
Ngwa igwe foto
Otu esi edozie àgwà Sim na SimPE
Esi edozi Kọmputa nke Na-agaghị Agbanwe
Egwuregwu Egwuregwu Ị Pụrụ Egwu na Facebook
Ihe mere ị ga eji VPN maka Nchọgharị Ịntanetị Onwe
Kedu ihe bụ CR2 Njikwa?
Esi esi nweta ngwa ngwa site na Mac App Store
Umu Igwe uzo nke kachasi nma kachaa ahia ahia na 2018
Esi weghachite usoro weghachite na Windows wepu nje
Kedu Pandora si emepụta ebe obibi na otu esi eme ha
Kedu ikikere DIFF?
Ebube kacha mma 8 kacha mma ịzụta na 2018
Olee otú Iji Wụnye The PyCharm Python IDE Na Linux
Otu esi egbochi ngalaba na Mail Mail na Web
Jikọọ Mkparịta ụka Facebook na AIM
Lee ihe ngosi PowerPoint abụọ n'otu oge
Ihe ndekọ DVD kachasị mma
Ihe Ị Kwesịrị Ịma Banyere Asụsụ Ajuju Ejiri
Ụgha 3 Ngwá Agha na Usoro Ammo
Ịzụta egwu: Download abụ ma ọ bụ gee egwu na Online?